Qaladaadkaan Ha Sameynin Inta Lagu Jiro Bilowga Shukaansiga
Qaladaadkaan Ha Sameyn Inta Lagu Jiro Bilowga Shukaansiga , Haddii Kale Fashil Ayaa Dhacaya
Ragga badan ayaa inta ay is leeyihin gabadha soo jiido waxa ay ku dhaqaaqayaan talaabooyin la yaab leh taasoo gabadha ku qasbeysa inay kumanaan mayl ka fogaato ninka, waxaana jiraan dhowr arin oo gabdhahamadax wareer ka qaadaan waqtiga shukaansiga.
1-Xariirka Badan: in aad wicitaan badan ku sameyso gabadha aad jeceshahay waxaad ku weyneysaa ixtiraamkii ay kuu haysay, waxa ayna ku qasbeysaa xittaa in ay wayso in ay kuu soo hilowdo , waxaa ninyahoow aan xariifka aheyn kula gudboon in aad xariiro kooban la sameyso waqtiga shukaansiga.
2-Ninka Ku Hor Ooya Haweeneyda: waxaa hubaal ah in haweeneyda jeceshahay ninka dareemaha naxariista leh balse ka digtonaaw niyahoow in aad ahaato nin jil jleeca ka batay si aysan haweeneyda u seegin fahamkii ninka ay ka qabtay.
3-Ninka dadka hortooda ku buun buuniya dareemihiisa: haweeneyda waa ay jeceshahay in meel waliba ugu muujiso jaceylka aad u qabto balse waa hab ixtiraam uu ku jiro ogoow kama hesho mid ka bad badis ah taasi oo dadka kale ka xishoodsiineysa .
4- In loola dhaqmo sida cunigii: ma jecla haweeneyda ninka sida cunug ula dhaqma , ee ninyahoow iska badel dabeecadaas marka aad shukaansiga ku jiro.
5-Ninka wax waliba haweeneyda adiga dooro dhaha: waxa ay shabakadda Arimahabulshada.com ku leedahay waxaa muhiim ah in xaaskada wax yaabaha qaar aad u doorto